Shir looga hadlaayay Kobcinta Cashuurta iyo Dakhliga oo lagu qabtay Garoowe(Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
Shir looga hadlaayay Kobcinta Cashuurta iyo Dakhliga oo lagu qabtay Garoowe(Sawirro)
May 18, 2021	in Warka
GAROOWE – Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland ayaa maanta qabatay shir looga hadlaayay kobcinta cashuurta iyo dakhliga Puntland.
Agaasimayaasha Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulayaasha
dakhliga ee dhammaan goboladda.
Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Dakhliga ayaa ka warbixiyay xaaladda dakhliga
ee Puntland iyo qorshaha dakhliga si kor loogu qaado dakhliga Guud ee Dowladda.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Mudane Cabdi Ibrahim Warsame ayaa
xusay tallooyin mira dhal ah oo kor loogu qaadayo dakhliga isagoo sheegay tiro qoddobo ah oo wax wayn ka badalaya dakhliga.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa shirka ka xusay in sanadka 2021 loo aqoon saday in dakhliga laga shaqeeyo iyadoo awoodda Wasaaradda xooga saari doonto sidii loo hubin lahaa in la helo Miisaaniyadda
dakhliga laga sugayo.
Shir ku saabsan Habka Qiimeynta Kartida Shaqaalaha oo lagu qabtay Garowe[Sawirro]
Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo qabatay Tababar ku saabsan Habka Maareynta Xogta Maaliyadda - Qaybta iibka(Sawirro)